Layma's World: နောက်တမိုး (သို့ ) M.T.U မှာရွာတဲ့မိုး
(အဆောင်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ တောင်တွေဘက်ကို လှမ်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ.......ဒီခေါင်မိုးပေါ် အဆောင်မှူးမသိအောင် ညဘက်ကြီး ခိုးတက်ပြီး “လေး” နဲ့“မိ” ကြယ်တွေ ရေခဲ့ဖူးပါသည်......“မိ” က “လေး”
နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ အခါ ဒီခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီး စိတ်ကောက်တတ်ပါသည်......)
Posted by Layma at 4:42 PM
Labels: Link to the past, Seasonal Post, Tag
အပြင်မှာ မိုးရွာနေတယ်……..။ ပြတင်းပေါက်ပိတ်ထားလို့မိုးလဲမပက်ပါဘူး……။ ဒါပေမယ့် “လေးမ” မိုးတွေစိုနေတယ်……..အတိတ်က မိုးရေစက်တွေ စိုနေတယ်……။
ဆိုတဲ့ အဆုံးသတ် စာကြောင်းလေးက သိပ်လှပါတယ်
ကျးဇူးရှင်က သစ်ပင်အောက်မှာ စက်ဘီးလေးဒေါက်ထောက်ပြီး ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ အခန်း မျက်စောင်းထိုး နေရာလောက်ကရပ်ပြီး……..“
ကျွန်တော့်ကိုသနားလို့တဲ့ တိမ်တွေတောင် ငိုချလိုက်တာ
မန်းချယ်ရီဆောင်လေး ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟင်... နာမည်ပြောင်းပစ်လိုက်ပြီလား. ဘူးသီးကြော်ဆိုင်လေးရော ရှိသေးလား. လွမ်းတယ်ဗျာ.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ. ခုလိုမျိုး စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ မိုးရွာခဲ့တဲ့ရက်စွဲများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
မအိမ့်ချမ်းမြေ့ …..ကျေးဇူးပါရှင်….ဒါနဲ့မလေးကို မိုးစိုသွားသေးလား…..
ကိုရန်အောင်…….အဆောင်နာမည်က အရင်အတိုင်းပါဘဲ…..ဂိတ်ဝကအကြော်ဆိုင်ကတော့ ၂၀၀၄ အထိရှိသေးတယ်…..အခုတော့ မရောက်တော့ ရှိမရှိ မသိတော့ဘူး….. ပြန်တွေးဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းလိုက်တာကျေးဇူးပါ…..မိုးရေချိုးပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားတာလည်း ကျေးဇူး……